2021 DECEMBER တွင် ဖြေဆိုထားသော JLPT Exam Online Result ယနေ့ မြန်မာ စံတော်ချိန် 7:30 am မှ စတင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
2021 DECEMBER တွင် ဖြေဆိုထားသော JLPT Exam Online Result ထွက်ရှိမည့် ရက် အသိပေးကြေညာခြင်း။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ JLPT စာမေးပွဲ Test Voucher ပေးပို့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍-
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် စာမေးပွဲကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း (နောက်ဆုံးအကြိမ်)နှင့် ပတ်သက်၍ ကြေငြာခြင်း။
JLPT Certificates ထုတ်ယူရန်အတွက် အသိပေးကြေငြာခြင်း။
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူစာရင်း ကြေငြာခြင်း (Mdy N4+ N3)
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူစာရင်း ကြေငြာခြင်း (Ygn N3)
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူစာရင်း ကြေငြာခြင်း (Ygn N4) Serial No. from 369 to 1476
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲဖြေဆိုသူစာရင်း ကြေငြာခြင်း (Ygn N4) Serial No. from 1 to 368
Application form Confirm (ဒုတိယအကြိမ်) ဖြစ်သူများစာရင်း (Yangon N3+N4) | Application form Confirm (ဒုတိယအကြိမ်) ဖြစ်သူများစာရင်း (Mandalay N3+N4)
Yangon N4 အတွက် Online Application Google Link သို့ တပြိုင်နက်တည်း ဝင်ရောက်သူ လွန်စွာများပြားသွားပါသောကြောင့် Sever ရပ်တန်သွားပြီး၊ Server သို့ ဝင်ရောက်နိုင်မှုမရှိခြင်း
ဒုတိယအကြိမ်ခေါ်ယူခြင်းအတွက် သတ်မှတ်လူဦးရေပြည့် ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း။
Application form Confirm (ပထမအကြိမ်) ဖြစ်သူများစာရင်း (Yangon N4)
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာ ဒုတိယအကြိမ် ခေါ်ယူရန် ကြေငြာခြင်း
Application form Confirm (ပထမအကြိမ်) ဖြစ်သူများစာရင်း (Yangon N3) နှင့် (MANDALAY N3 + MANDALAY N4)
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာ ဒုတိယအကြိမ် ခေါ်ယူရန် ကြေငြာခြင်း။
JLPT 2021 (December) စာမေးပွဲကြေးပေးသွင်းခြင်းလမ်းညွှန်။
သတ်မှတ်လူဦးရေ ပြည့်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေး ကြေငြာခြင်း။
၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ (JLPT) လျှောက်ထားခြင်း လမ်းညွှန်
၂၀၂၁ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ(JLPT) နှင့်ပတ်သက်၍ဖြည့်စွက်ကြေငြာခြင်း။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၅)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT) အတွက် ကြေညာခြင်း။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အားရပ်ဆိုင်းလိုက်ရပါကြောင်း အသိပေး ကြေညာအပ်ပါသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT) အတွက် စာမေးပွဲကြေး ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်လွှာတင်ရမည့်ကာလကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၃၁ရက် အထိ သတ်မှတ်ပြီး Covid-19 ပြန့်နှံ့ မှုများကြောင့် သြဂုတ်လ ၃၁ရက် န
၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် မကျင်းပဖြစ်ခဲ့သည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT) အတွက် စာမေးပွဲကြေး ပြန်လည်ထုတ်ယူရန် လျှောက်လွှာ တင်ရမည့်ကာလကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၃ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၃၁ရက် အထိ သတ်မှတ်ပြီး Covid-19 ပြန့်နှံ့ မှုများကြောင့် သြဂုတ်လ ၃၁ရက်
2020 July တွင်ကျင်းပမည့် Japanese Language Proficiency Test (JLPT) စာမေးပွဲကြေး ပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးကြေငြာခြင်း
2020 July တွင် ကျင်းပမည့် Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) စာမေးပွဲကြေးပြန်လည်ထုတ်ပေးခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍အသိပေးကြေညာခြင်း
2020 ခုနှစ် July လ5ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် JLPT Exam ရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့် ပတ်သတ် သည့် အကြောင်းအရာများကို MRTV-4 မှ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကို MAJA မှ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဆရာမဒေါ်မိုမိုစံမှ ပြန်လည် ဖြေကြားပေးထားခြင်း။
2020 July တွင် ကျင်းပမည့် Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) ရပ်ဆိုင်းခြင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း
JLPT 2020 July စာမေးပွဲဖြေဆိုရန်အတွက် ဖြေဆိုခွင့်ကဒ်(TESTVOUCHER ) မထုတ်ယူ ရသေး သောသူများသို့အသိပေးပန်ကြားခြင်း
JLPT 2020 July Exam (Yangon) အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြားများ ထုတ်ပေးမည့်ရက်ကို ၂၀.၃.၂၀၂၀(သောကြာနေ့) မှ ၈.၅.၂၀၂၀(သောကြာနေ့) အထိ တိုးမြှင့်ထုတ် ပေးမည် ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာခြင်း
JLPT 2020 (JULY) စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေးတွင် ဖြေဆိုမည့် စာဖြေသူများ (N1, N2, N3, N4 and N5 levels) များသို့ လျှောက်လွှာများကိုဆက်လက် လက်ခံနေပါကြောင်းအသိပေးကြေငြေခြင်း
JLPT 2020 (JULY) စာမေးပွဲကို ရန်ကုန်မန္တလေးတွင် ဖြေဆိုမည့် စာဖြေသူများ (N1, N2, N3, N4 and N5 levels) များသို့ လျှောက်လွှာများကိုဆက်လက် လက်ခံနေပါ ကြောင်းအသိပေး ကြေငြေခြင်း
JLPT 2020 JULY လတွင် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် Application form link ကြေညာခြင်းနှင့် သိရှိစေလိုသည့် အချက်များကြေညာခြင်း။
JLPT Exam 2020(July) Application Form ဖြည့်သွင်းရာတွင်လိုအပ်သော postal code များအားသိရှိနိုင်ပါရန် ဖော်ပြပေးခြင်း
JLPT Exam 2020(July) Application Form ဖြည့်သွင်းရာတွင်လိုအပ်သော postal code များအားသိရှိနိုင်ပါရန် အောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
2020 July လတွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(JLPT) အတွက် လျှောက်လွှာလက်ခံ ခေါ်ယူခြင်း။
ဇူလိုင်လ(၅) ရက်နေ့ တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မန္တလေးမြို့ နှင့် ပဲခူးမြို့ များတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲအတွက် လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါနေရာများတွင် လက်ခံသွားပါမည်။
၂၀၂၀ခုနှစ် ဇူလိုင်လ၅ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့၊မန္တလေးမြို့နှင့်ပဲခူးမြို့တို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ အစီအစဉ်ကြေငြာခြင်း။
ရန်ကုန်မြို့၊မန္တလေးမြို့နှင့်ပဲခူးမြို့တို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT 2020JULY
2019 December JLPT Exam အတွက် online result ကြည့်ရှုရာတွင် Roll No နှင့် Password 8 လုံးရိုက်သွင်းကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
MAJA မှ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ တွင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခဲ့သော တာဝန်ရှိသူအားလုံးကို အထူးကျေးဇူတင်ရှိကြောင်းနှင့်နောင်တွင်MAJA အသင်းနှင့်အတူ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါရန် ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။
MAJA မှ (၂၀၁၉) ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ တွင်ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ခဲ့သော တာဝန်ရှိသူ အားလုံးကို အထူးကျေးဇူတင်ရှိကြောင်း နှင့်နာင်တွင်MAJA အသင်းနှင့်အတူ စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက် ကြပါရန်ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်။
၁.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ဖြေဆိုရမည့်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) စာဖြေဌာနပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း။ စာမေးပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သတိပြုရမည့် အချက်များကို ကြေငြာပေး ခြင်း။
၁.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ဖြေဆိုရမည့်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) စာဖြေဌာနပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ မန္တလေးမြို့မှာကျင်းပမယ့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ (JLPT) ဖြေဆိုကြမယ့် သူတွေအားလုံးအတွက် သတိပြုရမည့်အချက်များ
(1) 2019 1st December တွင် ကျင်းပမည့်ဂျပန်ဘာသာအရည် အချင်း စစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် Roll No, Test Site, Room No များအား အသိပေးကြေငြာခြင်း။ (Yangon and Mandalay). (2) N4 Level ရန်ကုန် (YTU) တွင် ဖြေဆိုမည့်သူများအတွက် စာဖြေခန်းပြောင်းလဲဖြေဆိုရန်ကြေငြာခြင်း
(1) 2019 1st December တွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည် အချင်း စစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် Roll No, Test Site, Room No များအား အသိပေး ကြေငြာခြင်း။ (Yangon and Mandalay) (2)N4 Level အတွက် Yangon(YTU) တွင် ‌ဖြေဆိုရမည့်သူများ စာဖြေခန်းပြောင်းလဲဖြေဆိုရန် ကြေငြာခြင်း
၁.၁၂.၂၀၁၉ရက်နေ့တွင်ဖြေဆိုရမည့်ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) စာဖြေဌာနပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း။
၂၀၁၉ ခုနစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် JLPT (ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ) အတွက် လျှောက်လွှာတင်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းထားသူများအား စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား (Test Voucher) ထုတ်ပေးခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးမည်
၂၀၁၉ ခုနစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် JLPT (ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ) အတွက် လျှောက်လွှာတင်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းထားသူများအား စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား (Test Voucher) ထုတ်ပေးခြင်းကို တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ပေးမည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် JLPT စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲအခန်းစောင့်ရန် အကူအညီပေးမည့် MAJA အသင်းသားများအား သိရှိစေရန်ကြေငြာခြင်း
2019 ဂျူလိုင်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) online result ထွက်ရှိကြောင်း ကြေညာခြင်းနှင့် မန္တလေးမြို့တွင် JLPT 2019 December အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ online form ဖြင့် သာ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာ
2019 ဂျူလိုင်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သော ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) online result ထွက်ရှိကြောင်း ကြေညာခြင်းနှင့် မန္တလေးမြို့တွင် JLPT 2019 December အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ online form ဖြင့်သာ လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်တော့မည် ဖြစ်ကြောင်းကြေငြ
2019 December လတွင် JLPT စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် Application Form download လုပ်ခြင်းနှင့် Application Form ဖြည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန်ဖော်ပြပါပုံလေးတွေကို တင်ပေးထားခြင်း
2019 December လတွင် JLPT စာမေးပွဲ ဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများအတွက် Application Form download လုပ်ခြင်းနှင့် Application Form ဖြည့်သွင်းရာတွင် အခက်အခဲမရှိစေရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါပုံလေးတွေကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲအတွက် ကြေငြာခြင်း။
ဒီဇင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့နှင့်မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ အတွက် လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း လက်ခံသွားပါမည်။
7.7.2019(Sunday) တွင်ဖြေဆိုရမည့် JLPT စာမေးပွဲ အတွက် အချိန်စာရင်းထွက်ခြင်း နှင့် လိုက်နာရန်အချက်များ၊ သတိပြုရန်အချက်များဖော်ပြခြင်း
2019 7th July တွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် Roll No, Test Site, Room No များအား အသိပေးကြေငြာခြင်း။ (Yangon – N1, N2, N3, N4 & N5 Levels) ( Mandalay - All Level )
JLPT 2019 July (Yangon) နှင့် (Mandalay) မြို့များတွင် ဖြေဆိုရမည့် စာဖြေဌာနလိပ်စာများ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း။
ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်း စစ်စာမေးပွဲ (JLPT) ဖြေဆိုမည့်သူများသို့ အကြောင်းကြားခြင်း
JLPT စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းချက် များကို သေချာစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီးစာမေးပွဲကို ဖြေဆိုပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်
2019 ခုနှစ် July တွင်ဖြေဆိုမည့် JLPT Exam အတွက် Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်) ပျောက်ဆုံးပျက်စီးသူများအတွက် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်မည့်ရက်အသိပေးကြေငြာခြင်း။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် JLPT စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲအခန်းစောင့်ရန် အကူအညီပေးမည့် MAJA အသင်းသားများသိရှိစေရန်အချက်များ
၂၀၁၉ ခုနစ် ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် JLPT (ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ) အတွက် လျှောက်လွှာတင်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းထားသူများအား စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကဒ်ပြား (Test Voucher) ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁၁.၄.၂၀၁၉ အထိ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
၂၀၁၉ ခုနစ် ဇူလိုင်လ ၇ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် JLPT (ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ) အတွက် လျှောက်လွှာတင်ပြီး စာမေးပွဲကြေး ပေးသွင်းထား သူများ အား စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့် ကဒ်ပြား (Test Voucher) ထုတ်ပေးခြင်းကို ၁၁.၄.၂၀၁၉ အထိ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း
JLPT 2018 December တွင်ဖြေဆိုထားသော စာမေးပွဲအတွက် Certificates များ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း
JLPT 2018 December Certificate များကို ရန်ကုန်တွင် 25.3.2019 (Monday) မှ စတင်ကာ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပြီး မန္တလေးတွင် 26.3.2019 (Tuesday) မှစတင်ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
JLPT 2019 July စာမေးပွဲအတွက် ရန်ကုန်မြို့တွင် လျှောက်လွှာတင်ထားသူများ Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်) ကို အောက်ပါသတ်မှတ်ရက်အတွင်းတွင် လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။
ရန်ကုန်မြို့ နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ JLPT 2019 July
ဇူလိုင်လ (၇) ရက်နေ့ ရန်ကုန်မြို့ နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အတွက် လျှောက်လွှာများ ကို အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း လက်ခံသွားပါမည်။ JLPT 2019 July အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ email ဖြင့်ပေးပို့လျှောက်ထားခြင်း (သို့မ
(2.12.2018) မှာ ဖြေဆိုထားသော JLPT စာမေးပွဲရဲ့ Online Result ထွက်မည့်ရက် ကြေငြာခြင်း။
2018 December မှာ ဖြေဆိုထားတဲ့ JLPT စာမေးပွဲရဲ့ Online Result ကို ဖြေဆိုသူအားလုံးအောက်မှာ ပေးထားတဲ့ link ကတဆင့် ဇန်နဝါရီလ (၂၃) ရက်နေ့ မြန်မာစံတော်ချိန် မနက် (၇)နာရီခွဲတွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီရှင်။
ဂျပန်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ)မှစ၍၊ JLPT စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများ အတွက် စည်းကမ်းချက်များတင်းကျပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း
ဂျပန်စာ အရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ(၂၀၁၉ခုနှစ်၊ဇူလိုင်လ)မှစ၍၊ စည်းကမ်း ချက်များ တင်းကျပ်သွားမည် ဖြစ်သည့်အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့်သူများအနေဖြင့် စည်းကမ်းချက်များ ကို သေချာစွာ နားလည်သဘောပေါက်ပြီး စာမေးပွဲကိုဖြေဆိုပေးကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် Roll No, Test Site, Room No များအား အသိပေးကြေငြာခြင်း။ ( Yangon and Mandalay - N1, N2, N3, N4 and N5 Levels)
မင်္ဂလာပါရှင်.. ၂.၁၂.၂၀၁၈ (တနင်္ဂနွေနေ့)မှာ JLPT စာမေးပွဲဖြေဆိုမယ့် ကျောင်းသား/သူများ အားလုံးပဲ စာတွေရနေကြပြီလို့ ယုံကြည်ပါတယ်နော်... ဖြေဆိုမယ့်နေ့မှာ အခက်အခဲ မဖြစ်အောင် ဖြေဆိုရမယ့် level အလိုက် Roll No, Test Site, Room No တွေကို အလွယ်တကူ save လို့ရအောင် ပံ
JLPT 2018 December Yangon တွင် ဖြေဆိုရမည့် စာဖြေဌာနလိပ်စာများ အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း နှင့် JLPT 2018 December Mandalay တွင် ဖြေဆိုရမည့် စာဖြေဌာနလိပ်စာများ အသိပေး အကြောင်း ကြားခြင်း။
စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူတို့ လိပ်စာရှာရလွယ်အောင် JLPT 2018 December Yangon တွင် ဖြေဆိုရမည့် စာဖြေဌာနလိပ်စာများကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်.. YBS နံပါတ်များနျှင့်တကွ အနီးစပ်ဆုံးလမ်းညွှန် ပြောပြပေးထားပါတယ်ရှင်။ စာမေးပွဲဖြေမယ့်သူတို့ လိပ်စာရှာရလွယ်အောင် JLPT 2018 Decembe
၂.၁၂.၂၀၁၈ ရက်နေ့တွင် ဖြေဆိုရမည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) စာဖြေဌာန ပြောင်းလဲကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း
Level N4 မှ ခုံနံပါတ် 42801 မှ 45937 အထိ Yankin Education College (TTC) နှင့် Myanmar Marcantile Marine College (BayintNaung) တို့တွင် ယခင်ဖြေဆိုရမည်ဟု စီစဉ်ထားရာမှ ယင်းစာ ဖြေဌာနတို့၏ အရေးပေါ် အဆင်မပြေမှုကြောင့် အောက်ပါအတိုင်း ပြောင်းရွေ့ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင
ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးသော Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်) ပြန်လည်ထုတ်ပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ကြေညာခြင်း (ရန်ကုန်နှင့်မန္တလေး)
၂၀၁၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) အတွက် ထုတ်ယူပြီးသော Test Voucher (စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်) များ ပျောက်ဆုံး/ပျက်စီးပါက (၁.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၂၀.၁၁.၂၀၁၈) ရက်နေ့အတွင်း (အစိုးရရုံးပိတ်ရက်မှအပ) ရုံးချိန်အတွင်းတွင
JLPT 2018 December စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား (Test Voucher ) မထုတ်ရသေးသူများ အား အသိပေး အကြောင်းကြားခြင်း
JLPT 2018 December စာမေးပွဲအတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုခွင့်ကဒ်ပြား (Test Voucher ) မထုတ်ရသေးသော ကျောင်းများနှင့် တစ်ဦးချင်းလျှောက်လွှာတင်ပြီး လာမထုတ်သောသူများအား ၂၄.၉.၂၀၁၈ (တနင်္လာနေ့) မှ ၂၈.၉.၂၀၁၈ (သောကြာနေ့) အထိ Test Voucher လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါ
JLPT 2018 July တွင်ဖြေဆိုထားသော စာမေးပွဲအတွက် Certificates များ ထုတ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေငြာခြင်း။
*** JLPT 2018 July Certificate များကို 24.9.2018 မှ စတင်ကာ လာရောက်ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ ရန်ကုန်တွင်လျှောက်လွှာတင်သူများ။ နေရာ ။ MAJA Education Center အမှတ် (၆၆/A)၊ သူရလမ်း၊ (၉) ရပ်ကွက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။ 09 962751373
JLPT 2018 JULY စာမေးပွဲ online result ထွက်ရှိကြောင်း ကြေညာခြင်း
၁.၇.၂၀၁၈ တွင် ဖြေဆိုထားသော JLPT စာမေးပွဲ result များကို အောက်ပါ link တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ JLPT 2018 December
ဒီဇင်ဘာလ၂ရက်နေ့ရန်ကုန် နှင့် မန္တလေးမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ အတွက် လျှောက်လွှာများကို အောက်ပါအစီအစဉ် အတိုင်း လက်ခံသွားပါမည်။
Letter of Acknowledgement ကေ ျးဇူးတင်ရှိကြောင်းနှင့်ဖိတ်ကြားခြင်း
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Exam 2018 will be held in Yangon and Mandalay on 1st July 2018.
Japanese Language Proficiency Test (JLPT) Exam 2018 will be held in Yangon and Mandalay on 1st July 2018. Get everything ready for the exam. The exam is drawing very near.
visitors : 88,734